Ubuchwepheshe - Shandong Lanbeisite Educational Equipment Group Co., Ltd.
Buyini ubuchwepheshe obubhalwe phansi be-LONBEST LCD Blackboard?
Isikrini sokubhala siqukethe izingqimba ezintathu, ungqimba olungaphezulu luyi-PET ebonakalayo yefilimu ene-ITO ohlangothini oluyilo, ungqimba oluphakathi luyingqimba enekristalu ewuketshezi, kanti ungqimba olungezansi luyifilimu emnyama engabonakali esobala ene-ITO ungqimba oluvumayo kwelinye uhlangothi. Ama-monomers angama-polymerizable ancibilikiswa ohlelweni lwekristalu e-liquid angaxhunyaniswa ngokushesha kwinethiwekhi ye-polymer futhi uhlelo lwekristalu olungamanzi lungakha isakhiwo se-domain eningi ngemisebe ehlanganisiwe yokukhanya kwe-ultraviolet nokukhanya kwe-infrared nesikhathi esithile namandla. Isikrini sokubhala senza i-crystal ewuketshezi yakha ukuthungwa kwendiza ngokusebenzisa umfutho wokucindezela ukubonisa okubhaliwe bese iphenduka ibe ngumbhalo oqondile ngokusebenzisa i-voltage esetshenzisiwe, bese iphenduka ibe yi-focal-conicocolure ukusula okubhaliwe esikrinini.
Kungani sahlakulela ibhodi e-LCD? Ziyini izinzuzo zokuqeda abasebenzisi?
Amabhodi amnyama endabuko asuselwa ekubhaleni ngoshoki akhiqiza uthuli oluningi ngesikhathi sokubhala nokusula, okubeka engcupheni impilo yothisha neyabafundi. Ukubhala ebhodini elimhlophe kudla izibaya eziningi zomaka ezikhipha iphunga elicasulayo. Ukugqolozela imishini yokubonisa ngogesi (iphaneli eyisicaba, ipaneli yokuthinta ye-LCD, ibhodi emhlophe ye-elekthronikhi, njll.) Isikhathi eside kuzodala ukukhathala okubonakalayo futhi kulimaze amehlo abafundi. Ibhodi ebhaliwe yeLCD ebhaliwe yaxazululela ngokuphelele inkinga yokungcola komoya. Ungabhala nganoma yiziphi izinto ezinzima ebhodini, ngisho nezinzipho zethu.
Umgomo wokuboniswa webhodi yokubhalwa kwe-E isuselwe ekubonisweni kokukhanya kwangaphandle, akukho misebe kagesi; amehlo awakhathali, awacasuli nakancane. Izimpawu zokubhala ebhodini zibonakala kusuka kumamitha angama-30 kude ngenxa yokuphakama okuphezulu kwesilinganiso. I-engeli ebonakalayo ebanzi ye-Ultra ikwenza kucace ukubona kusuka kunoma iyiphi indawo yegumbi. Inkinobho eyodwa esula ingena esikhundleni sokwesulwa ngesandla ukonga isikhathi. Ngaphandle kwalokho, ukusula ngokwengxenye kuyatholakala. Iphuzu ngalinye ebhodini lingasulwa kaninginingi izikhathi eziyi-100,000. Ngokulondolozwa okusheshayo nokuhanjiswa okuhambisanayo, ukubhala kungakhiqizwa ngokuzenzakalela futhi kugcinwe kumadivayisi afana nomakhalekhukhwini, ama-laptops, anikezela ngamanothi we-elekthronikhi alula wokuhlola noma nini nanoma kuphi.
Sililawula kanjani ikhwalithi yomkhiqizo？
Imvelo engenawo uthuli
Ukuqina test ifilimu impahla eluhlaza
Ishidi lokumelana nokuhlolwa kwempahla eluhlaza
Ukuhlolwa kobufakazi bokumila kwemikhiqizo eyenziwe kabili
Ukuhlolwa kwemvelo ngokweqile
Ukuhlolwa okumelana nokugqokwa kwengaphezulu lebhodi
Isivivinyo sokulingisa seziyaluyalu zokuhamba
Kuqedwe ukuhlolwa kwekhwalithi yomkhiqizo
Imaphi amalungelo obunikazi esinawo ebhodini le-LCD?
Amalungelo obunikazi Emhlabeni Wonke Asetshenzisiwe: Ama-52 Namalungelo obunikazi Emhlaba Wonke Avunyelwe: 23
Inombolo yelungelo lobunikazi
IFILIMU YOKUBHALA I-LIQUID CRYSTAL, INDLELA, ISIQINISEKISO SOKUPHUMA KWEZIMPENDULO EZININZI
【발명 의 명칭】 부분 삭제 가 액정 액정 부분 부분 부분
Inhlangano yamalungelo obunikazi yaseYurophu （EPO）
Umkhandlu Wokubambisana weGulf (GCC)
Amalungelo obunikazi athembisa ukumboza amazwe angama-53
ECanada, United States, Japan, South Korea, Australia.
I-European Patents Organisation （EPO）: I-Albania, i-Austria, iBelgium, i-Bulgaria, iCroatia, iCyprus, i-Czech Republic, iDenmark, i-Estonia, i-France, i-France, i-Greece, i-Greece, i-Hungary, i-Iceland, i-Ireland, i-Italy, i-Latvia, i-Liechtenstein, i-Lithuania , Malta, Monaco, The former Yugoslav Republic of Macedonia, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Turkey, UK, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Morocco, IRiphabhulikhi yaseMoldova.
IGulf Cooperation Council (GCC): I-United Arab Emirates, i-Oman, iBahrain, iQatar, iKuwait, iSaudi Arabia.